WARFAAFIN MISE SIRFAAFIN? Ka bogo qoraal muhim u ah warbaahinta | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada WARFAAFIN MISE SIRFAAFIN? Ka bogo qoraal muhim u ah warbaahinta
WARFAAFIN MISE SIRFAAFIN? Ka bogo qoraal muhim u ah warbaahinta
(Muqdisho) 19 Abriil 2020 – Saxaafaddu waa mas’uuliyad culus. Waxayna qeyb ka tahay mukhaabbaraadka qeybtiisa aan qarsooneyn ee loo yaqaan “open source” iyo weliba qeybtiisa Falanqeynta.
Howgalka oo socda ayaa la arkayay sawirrada dad saqafka fuulaya, si ay ugu dhuuntaan.
Waxaa igu maqaal ah in dadka qaar uu waagu ugu baryay iyaga oo saqafka saaran, habeenka oo dhanna ay sawirradoodu wareegayeen baraha bulshada inkasta oo Hotelka la haystay.
Dhanka kale, waxaan arkayay saxaafadda qaar oo shalay galab soo qoray in weerarkii la soo afjaray. Taas oo khalad ahayd, waayo waxaan ka warqabnaa in ilaa saaka la haystay Hotelka inkasta oo aan xilliyada qaar xabbad la maqlin.
Saxaafaddu haddii ay goobjoog tahay waxay sheegi kartaa in aan wax rasaas ama qarax ah la maqlin hadda, laakiin in howlgalku dhammaaday iyo in kale ma aha in ay iyadu ku dhawaaqo. Waxay u taallaa Booliiska oo ay tahay in laga soo xigato.
Xataa haddii telefoonku mayeere yahay, mugdi marka la joogo iftiin ayuu bixinayaa. Qofka damca in uu ka jawaabo sow ma dhici karto in codkiisa uu ku soo hago malaggiisa?
Dhanka kale, qofka telefoonka haysta haddii uu booliisku ka soo wici lahaa si uu ugu gurmado, sow ma dhici karto in uu telefoonku mashquul ku yahay wicitaankaaga wardoonka ah? Intaas oo dhan haddii aanay dhicin sow bateriga ka dhammeyn maayo wicitaankaagu.
Ugu dambeyntii, haddii aad ogaato qof ku dhintay goobta, waxaa habboon in sawirkiisa iyo magaciisa midna aanad markiiba soo gelin saxaafadda. Waxaa ka habboon in horta aad wargeliso ehelkiisa ama aad ka dhowrsato daabacaadda ilaa ay cid kale wargelineyso ehelka marxuumka. Haddii aad meyd sawireyso, uma jraysid warqadda aqoonsiga, markaa uma baahnid in aad sawir ku dhow oo wajigiisa iyo dhaawacyada jirkiisa gaaray ay muuqdaan.
Previous articleSucuudiga oo ku tala jira in Taraawiixda iyo xitaa Ciidda Soonfur guryaha lagu oogo haddii…
Next articleHalka uu marayo dhismaha jidka isku xira Muqdisho-Afgooye (Turkiga oo gobollada u ballan qaaday mashaariic kan la mid ah)